अमेरिका जान सबैभन्दा सजिलो छ
– कन्सल्टेन्सीको स्थापना कसरी गर्नुभयो ?
सन् २००३ मा यस ईडु कन्सल्टेन्सीको स्थापना गरेको हँु । त्यो बेला मैले स्नातक तह सकाएको थिए । त्यतिबेला एक्कासी कन्सल्टेन्सी खोल्ने सोच आयो र युएसएमा विद्यार्थीको स्टुडेन्ट भिषाको लागि काउन्सिलिङ गर्नको लागि यो कन्सल्टेन्सी खोलिएको थियो । अहिलेसम्म नै यहि काम गर्दै आईरहेको छु ।
– अहिलेसम्म तपाईले कलेज तथा युनिर्भसिटीमा कति विद्यार्थी पठाउनुभयो ?
हामीले विभिन्न देशका एक सय भन्दा बढी कलेज तथा युनिभर्सिटीमा विभिन्न विषय अध्ययनका लागि पठाएका छौ । हामीले हालसम्म अमेरिका, अष्ट्रेलिया, साईप्रस, जापान, भारत न्यूजिल्याण्ड र बेलायतको विभिन्न कलेज तथा युनिर्भसिटीमा विद्यार्थी पठाइसकेका छौं । अमेरिकामा भने त्यहाँको स्टेटहरु भर्जेनिया, क्यालिफोर्निया, टेक्सास, मिसौरी, अलावामा लगायतका कलेज तथा युनिर्भसिटीमा विद्यार्थी पठाउने गरेका छौ ।
– सबैभन्दा कुन देशमा विद्यार्थी पठाउन सजिलो छ ?
हामीले सुरुदेखि नै अमेरिकामा विद्यार्थी पठाउने गरेकोले होला त्यही पठाउन सजिलो लाग्छ । तथापी हामीले अन्य देशमा पनि विद्यार्थीलाई पठाउने गरेको कुरा त मैले माथि नै उल्लेख गरिसके । अहिले अमेरिकाले विद्यार्थीको लागि केही हदसम्म सजिलो बनाई पनि दिएको छ । जस्तो अमेरिका जानको विद्यार्थीले प्रोपर्टी भ्यालुयसन र बैंक व्यालेन्स देखाईरहनुपर्दैन । खाली पासपोर्ट र ट्रान्सक्रिप्ट अनि भिषा भरेको फर्म मात्र लिएर जाने हो । महंगो पनि छैन । पछि भिषा लागेपछि फि पे गर्ने अथवा ड्राफ्ट बनाएर आफैले बोकेर लैजाने हो त्यो आफ्नो बिचार हो । त्यहाँ जाँदा सबै कुरा अन्तरवार्ता मै सोधिएको हुन्छ । विद्यार्थीले अन्य मुलुकमा जस्तो विभिन्न डकुमेन्ट लैजानु नपर्ने भएकोले कम्तीमा पनि पचास हजार देखि ८० हजारसम्म बचाउँछन् । अष्ट्रेलिया जान निम्न आय भएको परवारको विद्यार्थीहरु जान सक्दैनन् बढी लागत लाग्छ । त्यहाँ जानको लागि ऋण लिनुप¥यो भने एसबीआई बैंक र नबिल बैंक मध्ये एकबाट मात्रै लिन पाईन्छ । अन्य बैंकलाई उति साह्रो मान्यता दिदैनन । प्रोपर्टी भ्यालुयसन र बैंक व्यालेन्स तीन महिना अघि नै देखाउनुपर्ने हुन्छ । जापान जानको पनि त्यस्तै हो । जापान जानको लागि त्यहाँको भाषा पढ्नको लागि जाने हो । यहाँ दुई महिना भाषा पढेको हुनुप¥यो र फेरी जापानमा गएर पनि कम्तीमा १ वर्ष जापानिज भाषा पढ्नुपर्छ । त्यसपछि फेरी आफ्नो कार्ष त छदैछ । त्यहाँको भाषा नपढी यताको पढाईलाई निरन्तरता दिन पाईदैन । अष्ट्रेलिया र जापानको लागि पहिल्यै फि र डकुमेन्ट बुझाउनुपर्छ, भिषा लागेन भने फेरी रिफण्ड ल्याउनुपर्छ ।
– यस कन्सल्टेन्सीको शाखा पनि छ की ?
हामीले औपचारिक शाखा भने अहिलेसम्म विस्तार गरेका छैनौ । जति काम गरिएको छ यहिबाट नै काम गरिरहेका छौ । तर अहिले भर्खरै विराटनगरमा कन्ट्रयाक्ट अफिसको रुपमा उएटा अफिस स्थापना गरेका छौ ।
– यहाँबाट विदेश जाने विद्यार्थीलाई के–के सुविधा दिनुभएको छ ?
हामीले विधार्थीलाई अरु कन्सल्टेन्सी भन्दा केही केही सुविधा दिएका छौ । जस्तो कि भिसा प्रिपरेसन्सको नाममा अरु कन्सल्टेन्सीले शुल्क लिने गरेका छन् । सर्टेन पिरेडकोे लागि सञ्चालन गरेको क्लासमा हामीले फि नलिने गरेका छौं । हामीले प्रिपरेसनको क्लास फ्रिमा दिने गरेका छौ । विद्यार्थीले जहिलेसम्म क्लास लिन चाहन्छन त्यतिबेलासम्म हामीले दिने गरेका छौ ।
– अन्त्यमा भन्नुपर्ने केही छ की ?
भन्नु त केही छैन तर यो हाम्रो कन्सल्टेन्सीबाट नेपालमा रहेको सबै वर्गका विद्यार्थीलाई विदेश पठाईरहेका छौ । जसले पनि हाम्रो कन्सल्टेन्सी भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु ।